The Vampire Diaries Season 9: Havaozina ve sa foanana? - Fialam-Boly
The Vampire Diaries Season 9: Havaozina ve sa foanana?
The Vampire Diaries Season 9 Date Famoahana
Hijery The Vampire Diaries ve ny mpankafy ny vanim-potoana faha-9 taorian'ny vanim-potoana fahavalo sy farany tamin'ny tantara an-tsehatra ho an'ny zatovo supernatural an'ny CW efa-taona lasa izay?
Ny Diarin'ny Vampire, miorina amin'ny famoriam-boky lafo indrindra an'i LJ Smith, dia noforonina voalohany ho an'ny efijery kely nataon'i Kevin Williamson, mpamokatra Dawson's Creek sy Julie Plec, mpiara-miasa efa ela, ary navoaka voalohany tao amin'ny The CW tamin'ny 2009.
Ny andian-dahatsoratra naharitra ela, napetraka tao amin'ny tanànan'ny Mystic Falls mahafinaritra, nefa paranormal, dia nifantoka tamin'ny telozoro fitiavana vampira ary koa ny toetran'ny olombelona sy ny toetran'ny tanàna hafa.
The Vampire Diaries, etsy ankilany, dia niteraka tsy iray, fa spinoff roa - The Originals and Legacies - ary nanangona mpankafy natokana nandritra ny vanim-potoana valo teny amin'ny rivotra.
Nahafinaritra ny fampisehoana naharitra ela. Ny fiafaran'ny vanim-potoana fahavalony, fizarana ara-tantara manasongadina ny fiafaran'ny toetra tena ilaina sy ny fiafarana mahafaly vitsivitsy, namatotra tsara ny ankamaroan'ny tantara tsy voavaha.
Na dia eo aza ny famaranana mahafa-po ny andian-dahatsoratra, ny mpankafy dia mitaky vanim-potoana bebe kokoa; Noho izany, tokony havoaka ve ny The Vampire Diaries saison 9?
Nandeha efa ho efa-taona lasa izay ny fizarana farany an'ny The Vampire Diaries. Na eo aza izany dia iray amin'ireo fanangonana be mpijery be indrindra tamin'ny taona 2021 ny andiany. Ny vanim-potoana faha-9 amin'ny The Vampire Diaries dia tokony hanomboka amin'ny volana martsa amin'ity taona ity.
Miandrandra amim-panahiana ny fiantombohan'ny vanim-potoana faha-9 ny mpankafy, fa ho vanim-potoana iray ihany ve? Na eo aza izany, tsy misy fampahalalana azo antoka momba ny vanim-potoana fahasivy amin'ny tantara mahagaga.
Tamin'ny resadresaka vao haingana, nilaza i Ian Somerhalder fa tsy te hilalao intsony izy. Nina Dobrev, izay mpilalao sarimihetsika vehivavy, dia nanakoako ny fihetseham-po mitovy amin'izany. Vokatr'izany, ny vanim-potoana faha-9 dia mety tsy hitranga. Inona àry ny hevitrao momba izany?
Caroline Forbes dia Mpanjaka Candice.
Nina Dobrev dia mpilalao sarimihetsika malaza. Elena Gilbert dia mpanoratra monina any Etazonia
Jenna Sommers dia nilalao an'i Sara Canning.
Jeremy Gilbert no hilalaovan’i Steven R. McQueen.
Stefan Salvatore no hilalao an'i Paul Wesley.
Klaus Mikaelson no hilalao an'i Joseph Morgan.
Matt Donovan no hilalao an'i Zach Roerig.
Damon Salvatore dia nilalao an'i Ian Somerhalder.
Vicki Donovan no nilalao an'i Kayla Ewell.
Tyler Lockwood dia hilalao an'i Michael Trevino.
Alaric Saltzman dia Matt Davis.
Bonnie Bennett dia hilalao an'i Kat Graham.
Enzo St. John dia Michael Malarkey.
Ny 'The Vampire Diaries' dia natao tanteraka ao amin'ny tanànan'ny Mystic Falls, Virginia. Rehefa tonga teto ireo mpifindra monina avy any Nouvelle-Angleterre tamin’ny taonjato faha-18, dia nanjary fonenan’ny zavamananaina mihoatra ny natoraly maromaro io faritra io.
Elena Gilbert dia kamboty tanora namoy ny rainy sy ny reniny tamin'ny lozam-piarakodia. Nihaona tamin'i Stefan Salvatore izy, vampira tsara tarehy 162 taona, ary raiki-pitia taminy. Na izany aza, feno fanamby ny fifankatiavan'izy ireo, indrindra fa ny rahalahin'i Stefan Damon dia te-hamerina indray ny fitiavany taloha Katherine Pierce, izay mitovy amin'i Elena.
HAMAKY BEBE KOKOA : Oreshura Season 2: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba izany!!
Damon dia tsy niaraka tamin'i Stefan tamin'ny voalohany; fa, rehefa raiki-pitia tamin'i Elena, ny rahalahy tsirairay dia nanatevin-daharana ny hery mba hiarovana ny fitiavany amin'ny fanahy ratsy maro izay misy ao amin'ny Mystic Falls. Miaraka amin'ny fanampian'ny tselatra vitsivitsy nafafy nandritra ny fizarana, dia mianatra momba ny angano sy ny tantaran'ny tanàna ihany koa isika.
Ny endri-tsoratra hafa izay mandray anjara amin'ny rihana dia ny zandrin'i Elena Jeremy, ary koa i Bonnie, Caroline, Matt, ary Tyler, naman'i Elena. Vicki sy Alaric dia mponina roa hafa ao amin'ny Mystic Falls. Mihaona amin'ny Filankevitry ny Mpanorina ny tanàna ihany koa izahay, izay ahitana fianakaviana malaza izay nanorina ny faritra tamin'ny voalohany.
Ny hany asan'izy ireo dia ny mitazona ireo singa mihoatra ny natoraly toa ny vampira, ny werewolves, ny mpamosavy, ny hybrides, ary ny fanahy paranormal tsy ho ao an-tranony.
Ny hazakazaka marina dia tena zava-dehibe tamin'ny fampisehoana. Tao anatin'ny fizaran-tantara mampientam-po izay nahitana ny sasany tamin'ireo fahafatesan'olona nisongadina indrindra sy fiafarana mahafaly, ny fiafaran'ny taom-pilalaovana valo dia nampifandray tamim-pahombiazana ny ankamaroan'ny tantara tsy voavaha.
Na dia eo aza ny famaranana mafy mahafa-po, ny mpankafy ny seho dia maniry ny hahita fizarana bebe kokoa; Na izany aza, mety te-hahafantatra izy ireo hoe rahoviana no handeha ny 'The Vampire Diaries' vanim-potoana faha-9?
HAMAKY BEBE KOKOA : Famoahana ny vanim-potoana 3 Code Geass: Havaozina amin'ny taona 2022 ve ity andiany ity?
Raha miverina ny 'The Vampire Diaries' dia mety hisy olona hafa ankoatra an'i Elena, Stefan, ary ny mponina ao Mystic Falls, satria efa lasa faribolana feno ny tranony. Soa ihany fa mbola mandeha ny spinoff 'Legacies' ary feno atody paska 'The Vampire Diaries' ampy hamenoana ny banga miendrika vampira amin'ny fiainan'ny mpankafy rehetra.
Ny Vampire Diaries vanim-potoana faha-9 dia ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao. Manantena aho fa nahafinaritra anao ity lahatsoratra ity. Araho hatrany raha mila fanazavana fanampiny!
Hogwarts Legacy: Daty Famotsorana, Trailer & More!
Tsy fantatra: Caitlyn Jenner Documentary 2021
Ahoana ny fomba hamafana kaonty instagram
nvidia geforce traikefa nisy zavatra tsy nety andramo indray ny traikefa geforce
mijery sarimihetsika maimaim-poana famoahana vaovao an-tserasera tsy misintona
ny fomba fanaovana tabilao ho an'ny fifanolanana
hoditra minecraft tsy voasakana ao an-tsekoly